आश्विन १९, २०७४ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — सुन त्जुले भनेका छन्, ‘युद्धको सबभन्दा ठूलो कला यही हो कि शत्रुलाई नलडिकनै परास्त गर्न सकियोस्’ । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण एवं चुनावी तालमेल गर्न एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच निर्माण भएको गठबन्धनले पहिलो दृष्टिमा यस्तै सन्देश दिन्छ ।
एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको राजनीतिक विजय मानिएको यस गठबन्धन निर्माणले अहिले मुलुकभित्र र बाहिरका आफ्ना सबै प्रतिपक्षीलाई गतिलो ‘शह’ दिएको छन्। रणनीतिक दाउपेचको सतरञ्जमा अहिले निश्चय नै ओलीले ‘मात’ नै दिएको छ।
उता क्रान्तिकारी प्रचण्डले त अवधीको एउटा आहानजस्तै, ‘प्यादे से फर्जी भयो, टेढो–टेढो जाए’। सतरञ्जको खेलमा ‘प्यादा’ सोझो चाल चल्छ भने ‘फर्जी’ टेढो चाल चल्छ। उक्त आहानमा प्यादा जब फर्जीमा पदोन्नति हुन्छ, त्यतिखेर उसले प्रस्तुत गर्ने रवाफ फरक हुन्छ भनिएको छ। अधिकांश आहानले आफ्नो कलेवरमा युगीन संस्कृति र इतिहासलाई लुकाएर राखेको हुन्छ। जो एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा विरासतको रूपमा सर्दै जान्छ, जसको प्रयोग हामी सर्वमान्य सत्यको रूपमा गर्छौं। ६ बुँदे सहमतिमा भनिएजस्तै समाजवादका आधार तय गर्न अस्तित्वमा आएको वामपन्थीहरूको यो नौलो प्रकृतिको गठबन्धन अन्तिम अवसर र प्रयोगजस्तो हो।
कतिपयले अहिले पनि माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड वाम एकताको नाममा अर्को ठूलो नाटक मञ्चनका क्रममा त छैनन् भन्ने शंका गरेका छन्। तर कतिपयले लोकतन्त्रमा दलहरूको विलय र नयाँ अस्तित्व निर्माण स्वाभाविक ठान्छन्। दल छान्ने विकल्पमध्ये एउटा सशक्त पार्टीको विरुद्धमा अर्को उत्तिकै सशक्त विकल्प जनताले खोज्छ र जुन पार्टीले आफ्नो व्यापकता र सामथ्र्य प्रदर्शित गर्छ, जनताको अर्को पक्षले त्यसलाई नै विकल्पको रूपमा स्वीकार्छ। मताधारका आधारमा वामपन्थीहरूको एकजुट अप्राकृतिक नरहेको र लोकतन्त्रका लागि थोरै तर बलिया दलहरू हुनु जायज प्रक्रिया नै रहेको अभिमत प्रकट गरिरहेका छन्। तर जसरी चमत्कारी तरिकाले राजनीतिमा वाम एकता अभियानको घोषणा भएको छ, त्यसले तत्काल र दीर्घकालमा पार्ने प्रभाववारे तटस्थ समीक्षा हुन जरुरी भइसकेको छ। अहिले एकथरीले हर्षगान गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले दु:खान्त अवस्था मानिरहेका छन्। नेपाल जस्तो शिशु गणतन्त्र रहेको मुलुकमा दलहरूको हिँडाइको गति र मतिले पनि आन्तरिक र बाह्य रूपमा धेरै कुरा निर्धारण गर्छ।
६ बुँदे सहमतिबारे अझै भाष्य आउन बाँकी छ। वाम एकता अभियानको अवतरणको प्रक्रिया, पात्र र परिणामबारे विभिन्न पाटोबाट गम्भीर विमर्श हुनैपर्छ। यो साता महात्मा गान्धीको जयन्ती विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको रूपमा मनाइँदैछ। गान्धी जहिले पनि प्रक्रिया, पात्र र परिणाम तीनवटै पक्षलाई समान रूपले हेर्थे। यिनको प्राथमिकतामा तीनवटै पथ्र्यो। उनका प्रत्येक क्रियाकलाप गर्नुपूर्व यो तीनवटै पक्षमाथि दृष्टि दिइएको हुन्थ्यो। वाम एकता अभियानले कस्तो खालको समाजवादको आधार तय गर्ने हो, न्यायपूर्ण समाज भनेको कस्तो हुने हो? हिजोका दिनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति आफ्नै अन्दाजमा यी शब्दहरूको अर्थ दिने प्रयत्नमा थिए। नयाँ ‘फ्युजन’को पस्थितिमा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो? त्यतातिर ध्यान सबैको छ। यो अभियानका स्रष्टाहरूले यसबारे प्रस्ट्याउनैपर्छ। वाम एकता अभियानले सहिष्णु र खुला समाज निर्माणमा कस्तो क्रियाशीलता देखाउँछ, त्यसबारे अनेकांै अनुमानका खेती गर्न थालिएका छन्। जनसामान्यमा रहेका जिज्ञासाको घमासानलाई समय छँदै चिर्नुपर्छ।
जतिखेर राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा एकताबद्ध कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वअघि बढाउने सपना बाँडिँदै थियो, त्यतिखेर नेपाली सेयर मार्केटमा कुनै उथलपुथल देखिएन। यसले के देखाउँछ भने अहिलेका वामपन्थी भनाउनेहरूले पनि हिजोका दिनमा जसरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई आत्मवरण गरे र दलाल अर्थतन्त्रको अभ्युदय भयो, त्यस स्थितिमा नेपाली आर्थिक जगत अचम्मित नरहेको देखाउँछ। क्रान्तिका नायक र सपनाका व्यापारीहरूको नयाँ प्रस्तुतिले राजनीति बाहिरकालाई चकित बनाएको छैन। बरु अभियानभित्र नै उकुसमुकुसको संकेत देखिन थालेको छ। जसरी आउँदा चुनावमा भागबन्डा गरिएको छ, त्यसले गर्दा कतिपय महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्ताको सपना असमयमा नै शरदको शीतजस्तै ओभाएर जान्छ।
अरूको बुइँ चढेर अगाडि बढ्ने नेपालको राजनीतिक परम्पराजस्तै छ। नेपाली राजनीतिमा भारत एउटा प्रभावकारी पक्षको रूपमा देखिँदै आएको हो। समय–समयमा उसले सूक्ष्म व्यवस्थानमा पनि सक्रियता देखाउने गरेको छ। यसप्रति चरम असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने एउटा जमात अर्को छिमेकी चीनको तर्फबाट त्यस्तै अभ्यासको अभ्यार्थी पाइन्छ। अहिलेको चमत्कारिक निर्णयमा कैयौं कोणबाट चीनको धाप रहेको बताइन्छ। भारतलाई गार्ली गर्दै नेपालमा दशकौंदेखि एउटा वर्गले आफूलाई वैधता (लेजिटिमेसी) प्रदर्शन गर्न आफ्नो अति राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्।
भारतीय विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रले नेपालमा अवाञ्छित गतिविधि गर्दा भारतभित्र पनि स्वतन्त्र चेत भएका नागरिक समाजले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र विवेकको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। तर चीनको अग्रसरताको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्ने हो, त्यसबारे हामीकहाँ सूचनाको अभाव छ। खालि षडयन्त्रको आडमा विश्लेषण गर्ने र अति राष्ट्रवादको भरमा राजनीति गरिरहने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिँदैन। दिल्ली र बेइजिङ समर्थकका आधारमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकरण हुने हो भने यसले राजनीतिक पुनर्संचनाको सम्पूर्ण परिकल्पनालाई तहसनहस गर्छ। त्यसैले के नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ?
आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रवादी सपनाको व्यापार गर्ने तुजुक छचल्किनेछ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकरण निम्त्याउने र नयाँ द्वन्द्वको अभिरेखांकन हुने आंँकलन गर्न थालिएको छ। वाल्टर लिपम्यानको प्रसिद्ध पुस्तक ‘पब्लिक अपिनियन’मा जनमत निर्माणको प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा केलाइएको छ। सामान्य मान्छेहरू गम्भीर र जटिल कुरा बुझ्दैनन्, तिनलाई सरल रूपमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा तथ्य र तर्कभन्दा पनि जसले कुरा बङ्ग्याएर सूचनाको खेती गर्न सक्यो, उसले बाजी मार्छ।
कांग्रेसको कुवा खनाइ
कांग्रेसको यतिखेर वामपन्थी अभियानीहरूसंँग विश्वासको जग खस्किएको अवस्था छ। कतिपय कांग्रेसीमा वामपन्थीहरूको रणनीतिक पेलाई तथा सत्ताकब्जाको त्रास उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनलाई अप्रत्यासित ठान्छ र आहतजस्तो छ। वामपन्थी वर्चस्ववादी र अहम्वादी मानसिकताले प्रदेश र केन्द्र सबैतिरको मत सोहर्ने हो भन्ने चिन्ताले हिजोसम्म आत्मघाती गृहकलहमा रहेका कांग्रेसीहरू स्वाभाविक रूपमा ऐक्यबद्ध हुने स्थिति आएको छ। तर यसका निम्ति यो शक्तिले अन्य उदार लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको मोर्चा बनाउनु त ठिकै हो, तर यसले दक्षिणी छिमेकीसंँग बढी नजिकिने प्रयत्न गर्ने हो भने आउँदा चुनाव कुन छिमेकीको नेपालमा प्रभाव बढोत्तरी हुनदिने हो, त्यसको जनमत संग्रह हुन जान्छ। त्यस अर्थमा कांग्रेस अहिले सिंगौरी राजनीतिमा जाने होइन। नत यो कांग्रेसका लागि कुवा खन्ने समय नै हो। उसले २०६२/६३ पछिका परिवर्तनकारी एजेन्डालाई मुखर रूपमा शिरोधार्य गर्नुपर्छ र आफू विरुद्धका निराधार प्रचारलाई चिर्न सक्नुपर्छ। समस्या के भइदियो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वसनीयता र योग्यताको इतिहास निर्विवाद छैन र आगो सल्किरहेको अवस्थामा समेत उनको
आह्वानलाई पत्याउन धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ।
मधेसी शक्तिहरू आफू चक्रव्यूहमा पँmसेको अनुभूति गरिरहेका छन्। तिनीहरूको बुझाइमा अहिलेको वाम अग्रसरताले तिनका नेतृत्व वर्गमा जकडिएको वर्चस्ववादी र आत्मकेन्द्रित श्रेष्ठताको मानसिकतालाई उजागर गरेको बुझाइ रहेको छ। पहिचान, स्वशासन तथा स्वनिर्माणको मधेसी एजेन्डालाई तिनीहरूले अबका दिनमा थाती राख्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। हिजोसम्म प्रचण्डले मधेसी मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको र बाबुराम भट्टराई नयाँ प्रतिबद्धता देखाउँदै आएका थिए। तर वर्तमान समीकरण पश्चात मधेसी मुद्दाको संविधान संशोधनको मार्गचित्र के हुने हो? प्रचण्डको हाउभाउ हेर्दा उनले मधेसी शक्तिसँंग गरेका सबै सहकार्य र त्यसले हासिल गरेका उपलब्धि भुलेको बुझाइ मधेसी दलहरूभित्र छ।
द्वन्द्व पीडितहरूले भन्न थालेका छन्, ‘हत्या, हिंसाको हिसाबचाहिँ दिनैपर्छ’। माओवादीले विगतमा क्रूरतापूर्वक अनेकौं हत्या गरेका छन्। कहिले कांग्रेससँंग नजिकिएर भ्रष्टाचारबाट जोगिने त कहिले एमालेको ओत लागेर संक्रमणकालीन न्यायबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई एकथरी द्वन्द्व पीडितले दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा लिएका छन्। माओवादी आफ्नो फाइदा लिन खप्पिस छन्। त्यसैगरी यदि सरकार परिवर्तन भयो भने त्यो कस्तो चुनावी सरकार बन्छ र त्यसले कसरी चुनावी बन्दोबस्ती गर्छ, त्यसलाई पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले मिहिन तरिकाले नियालिरहेका छन्।
गणतान्त्रिक यात्राको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुलुकको राजनीति र शासन भने दिन–प्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ। आम जनताको माझमा राज्यले आफ्नो औचित्य र अस्तित्व गुमाउँदै गइराखेको अवस्था छ। लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिने उत्तरदायी शासन तथा कानुनीराज जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा ह्रास आइराखेको छ। निर्वाचित संस्थालाई स्थायी सत्ताका अन्य अंगले निर्देशित गर्न थालेका छन्। आखिर पछिल्ला वर्षहरूमा लामो इतिहास र अनुभव बोकेका दलहरूले नै राजनीति र शासन सञ्चालनका मुख्य हर्ताकर्ता रहिआएका छन्। नयाँ वाम एकताका अनुहारहरू तिनै हुन्, जुन हिजो नयाँ संविधानका रचनाकार थिए, एउटा नेपाली कांग्रेस छाडेर।
राजनीतिक दलहरू ठिक ढङ्गले चल्न नसकेकै कारणले गर्दा देशको स्थिति असहज, असामान्य र गम्भीर हुँदै गएको हो। यतातर्फ नयाँ वाम गठबन्धनले ध्यान दिनु र विमर्शको थालनी गर्नुभन्दा केवल सत्तामा अर्जुनदृष्टि राख्यो भने मुलुकको व्यथा ज्युँकात्युँ रहनेछ। नयाँ सपनाका आधारमा पुरानै नेतृत्वले फेरि केही समय शीर्षमा बसिरहने र भागबन्डामा चलिरहने कार्यशैली रहिरह्यो भने सत्तामा नयाँ अनुहार त आउला, तर मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था थप अधोगतितिर धकेलिँदै जानेछ। किनभने दलहरूमा व्याप्त अव्यवस्था नै अहिले मुलुकले भोग्नु परिरहेको व्यथाको प्रमुख कारक हो।